Maxbuus Afrikaan Ah Oo Da’diisu Kor U Dhaaftay 100 Sannadood Oo Haddana Wali Sugaya In Lagu Fuliyo Xukun Dil Ah | Burconews
Maxbuus Afrikaan Ah Oo Da’diisu Kor U Dhaaftay 100 Sannadood Oo Haddana Wali Sugaya In Lagu Fuliyo Xukun Dil Ah
Celestine Egbunuche oo ah maxbuus loo heysto fal dil ah ayaa loo aqoonsaday inuu yahay maxbuuska ugu da’da weyn dalka Nigeria iyadoo uu socdo ol’ole ku saabsan in la sii daayo. Da’diisu waa 100 sano, wuxuuna xabsiga ku jiraa 18 sano ka dib markii lagu helay dambi ku saabsan inuu qaban qaabiyay fal dil ah. Marka la eego wajigiisa wuxuu u muuqdaa qof ka qoomameysan dambiga lagu helay, isagoo fadhiya qol ku dhex yaalla xabsiga oo maxaabiista la soo booqdo ay dadka kula kulmaan. Hase ahaatee wuu iska aamusanyahay- wuuna ka duwanyahay maxaabiista kale ee ka dhex buuqeysa xabsiga ay ku xidhan yihiin oo lagu magacaabo Enugu, kaasoo ah jeel ammaankiisa aad loo adkeeyay oo ku yaalla koonfurta-bari ee dalka Nigeria. Wiilkiisa Paul Egbunuche, oo 41 sano jir ah ayaa fadhiya garabkiisa – isaga ayaana u hadlaya.
Qudhiisu wuxuu ku jiraa xabsiga wuxuuna la dambi yahay aabihii. Labadoodaba waxaa lagu eedeeyay iney kiraysteen dad afduub iyo dil u geystay nin ay ku muransanaayeen arrimo la xidhiidha lahaansho dhul ku yaalla gobolka Imo. Paul wuxuu ku adkysanayaa in isaga iyo aabihii aanay wax dambi ah lahayn.
Waxaa xabsiga la dhigay sannadkii 2000 waxaana ugu dambeyn sannadkii 2014-kii lagu riday xukun dil ah, ka dib markii dambigooda loo helay caddeymo ku filan. Suurta gal ma ahayn in xidhiidh lala sameeyo qoyska uu ka soo jeedo ninka loo heysto iney dilkiisa qorsheeyeen – xitaa masuuliyiinta xabsiga Nigeria wax xidhiidh ah kama hayaan qoyskaas.
Isagoo ay eegayaan saraakiisha xabsiga, ayuu Paul noo sheegay in aabihii aanu awoodin inuu in badan hadlo isla markaana aanu hadda waxba ka ogeyn xaaladaha ku hareereysan maskaxdiisuna isku dhex yaacsan tahay. “Marka aad wax weydiiso, wuxuu kuu sheegayaa wax kale. Dhakhtarka ayaa ii sheegay in arrintaas ay sabab u tahay da’diisa, wuxuu noqday sida qof carruur ah. Mararka qaar wuxuu i weydiiyaa: Dadkani oo uu ula jeedo maxaabiista, maxay halkan ka sameynayaan?” ayuu yidhi wiilka ninkan odayga ahi.
Paul wuxuu sheegay inaanu ka ag dheeraanin aabihii oo uu si joogto ah u xannaaneeyo tan iyo markii ay xaaladdiisu heer xun gaadhayba. Dhibaatooyinka maxbuuska waayeelka ah heysta waxaa ka mid ah cudurka Macaanka iyo inaanu indhaha si wanaagsan waxba uga arkin wiilkiisuna wuxuu sameeyaa wixii karaankiisa ah ee uu ku caawin karo. “Waxa kaliya ee aan xaaladdiisa kula tacaalo waa raashinka, iyaguna [oo uu ula jeedo ciidanka xabsiga] waxay siiyaan xoogaa dawooyin ah”. Ayuu yidhi.
Wiilka iyo aabihii waxay xabsi kula jiraan dad kale oo lagu riday xukunno dil ah, waxayna ka go’doonsanyihiin dadka guud ee xabsiga ku jira. “Marka aan hurdada ka soo kaco subixii, waxaan u karkariyaa biyo waanan u maydhaa jidhka,” ayuu yidhi Paul. “Waxaan ka baddalaa dharka ka dibna waxaan u diyaariyaa cuntada. Haddii ay albaabka xabsiga furaanna waxaan geeyaa bannaanka si uu qorraxda u helo. “Mar walba waan u dhowahay, waan la sheekeystaa waanan la ciyaaraa”. Paul wuxuu sheegay in maxaabiista kale ay mar mar ka caawiyaan xannaanaynta aabihii, in badan oo ka mid ahna ay doonayaan in isaga xabsiga laga sii daayo.
Markii uu aabihii gaadhay da’da 100 sano oo ku beegneyd 4-tii bishii August ee sannadkan waxaa la shaaciyay munaasabado dabaal deg ah oo xabsiga dhexdiisa loogu sameeyay iyo baaq ku saabsan in la sii daayo balse wali dawladdu go’aan may gaadhin lamana oga in ay sii dayn doonto ninkan duquubay ee dilka ku xukuman.